अर्थमन्त्रीको अर्को राम्रो कदम – अब सरकारी कार्यालयले नयाँ गाडी किन्न नपाउने…हेर्नुहोस् । – yuwa Awaj
कार्तिक २८, २०७७ शुक्रबार 5
काठमाडौ : अर्थ मन्त्रीका रुपमा विष्णु पौडेल आएपछि केही जनपक्षिय निर्णय हुन थालेका छन् । केही दिन अघि पुस्तकमा लगाएको क’र छुट गरेका अर्थमन्त्री पौडेलले अब मितब्ययीताका लागि मन्त्रालयकालागि नयाँ सवा’रीसाधनमा ख’रिदमा रो’क लगाएको छन् ।
अर्थमन्त्री पौडेलले आर्थि’क मि’तव्ययितासम्बन्धी माप’दण्ड जारी गर्दै यस्तो नीति लागू गरेका हुन् । सार्वजनिक खर्चमा मित’व्ययिता कायम गर्नेस’म्बन्धी मा’पदण्ड २०७७ मा सार्वजनिक खर्च दुरु’पयोग भएको भन्दै सवा’रीसाधनमा ख’रिद तथा प्रयोगमा नयाँ व्यवस्था गरेको छ। जसमा अब सवारी साधन गरिद गर्न नपाईने उल्लेख छ ।
अत्यावश्यक ख’रिद गर्नुपरेमा पनि अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिए पछि मात्र ख’रिद गर्नु पर्नेछ । राम्रै अवस्थाका गाडी थन्क्या’एर नयाँ गाडी किन्ने प्रचलन बढ्दै गएपछि अर्थमन्त्रालयले त्यसमा लागि अनावश्यक खर्च घटाउन यस्तो नि’र्णय गरेको हो ।
हरेक वर्ष सरकारले नयाँ गाडी ख’रिद तथा इन्धन ख’र्चमा अर्बौँ रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ। अनावश्यक मानिसहरुले पनि पहुँचकै आधारमा सरकारी सम्पत्ती दुरु’पयोग गर्दै आएका छन् । सिंहदरबारलगायतका ठाउँमा सामान्य मर्मत नगरी राखिएका गाडीको डम्पिङ साइट बनेको छ।
फेसबुकमा को’रोना भएको स्ट्याटस पोष्ट गरेको ४ घण्टापछि प’क्राउ !
बैकिङ कसुर अन्तर्गत चे’क बा’उन्सको मु’द्दामा सुन्दर यातायात प्रालिका अध्यक्ष भेषबहादुर थापा प’क्राउ परेका छन् । महा’नगरीय प्र’हरी परि’सर, काठमाडौंको टोलीले अध्यक्ष थापालाई प’क्राउ गरेको हो। महानगरीय प्र’हरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख श्याम ज्ञवालीले उनलाई कालिमाटीबाट पक्रा’उ गरिएको जा’नकारी दिनुभयो ।
काठमाडौं प्रह’री प्रमुख ज्ञवालीका भने, उनीवि’रूद्ध झविन्द्रप्रसाद बञ्जाडेले उ’जुरी दिएको र ’सञ्चा’लकलाई एक करोडको चेक बा’उन्स गरेको हुँदा प’क्राउ गरेको हौ ।
प’क्राउ पर्ने निश्तित भए प’श्चात सुन्दर यातायातका अध्यक्ष
भेषबहादुर थापाले आफ्नो फेसवुक स्ट्या’टसमा आफुलाई को’रोना भएकोमा १५ दिनका लागि भनेर पोष्ट समेत गरेका थिए । पबक्राउ पर्न चार घण्टा अघि थापाले आफुलाई को’रोना भएको स्ट्याटस फेसबुकमा पो’ष्ट गरेका थिए । उनलाई को’रोना भएको हो या होइन भन्ने विषयमा भने प्रह’रीले भोलि बिहीबार बुझ्ने भएको छ ।
Prevकमल थापाले क्रा’न्तिको मालिक तपाईहरु होइन विदेशी शक्ति हो भनेपछि रन्किए बाबुराम !
Nextपाल्पाको एउटै गाउँमा फल्यो १६ लाख किलो आलु…हेर्नुहोस् ।